Hal-abuurnimada Sawirka Farsamada ee Kaamirada-Worn Sanadaha oo dhan | Xalka OMG
Hal-abuurnimada Sawirka Farsamada ee Farsamada Qalabka ee Sannadka oo dhan
Waxaa ka mid ah aalado badan oo elektiroonig ah oo aan maalin walba isticmaalno, kaamarooyinka ayaa shaki la’aan ah kuwa ugu caansan. Laga bilaabo casriga casriga ilaa laptops ilaa nidaamyada amniga guriga, wax walba waxay leeyihiin kamarad yar. In kasta oo ujeedada ugu weyn ee kaamirooyinka ay tahay in la duubo xusuusta aad u jeceshahay ama waxyaabaha ina xiiseeya, qaarkood waxaa loogu talagalay hawlo gaar ah. Tusaalaha ugu horreeya waa cam-cam (cam-cam), ama kaamirooyin xiran ama xajinaya jirka.
Sida magaca tilmaamaysa, cam-body-cam ayaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo annaga. Isticmaalayaasha sida ugu badan u isticmaala waa saraakiisha booliiska Mareykanka ama shaqaalaha xoojinta sharciga, kuwaas oo u adeegsada inay duubaan sawirrada cadaymaha iyo maragyada. Kaamirada camalka waa noocyo kale oo kaamirooyin ah oo lagu dhejin karo jirka oo kuu oggolaanaya inaad duubto howlahaaga gaarka ah. Tani waxay sidoo kale ka dhigeysaa kuwo kufiican fiidiyoowga qorista fiidiyoowga ama toogashada isboorti.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay, tikniyoolajiyadda oo ay weheliso hal-abuurnimada iyo horumarka laga gaadhay xagga bilayska iyo amniga ayaa dib u sharraxay qaybo badan oo ka mid ah bilayska iyo adeegyada amniga. Ujeeddada ugu weyn ee loo arko tikniyoolajiyadda sida kordhinta sharciga sharciga si loogu isticmaalo rabshadaha (sida adeegsiga TASERs) - sida baaritaanka DNA (Roman, 2008) - iyo sidoo kale farsamooyin lagu horumarinayo hufnaanta iyo waxtarka adeegyada ay bixiyaan booliska iyadoo laxiriirta baaritaanka dambiga iyadoo lala xiriirinayo qaabka saadaalinta booliska (Intelligence-Led) - Booliisaka) iyo macluumaadka wax ka qabashada (sida falanqaynta falalka kulul ee ay sameeyeen CrimeView iyadoo loo marayo Nidaamka Macluumaadka Booliiska ee POL).
Teknoolojiyadda ayaa sidoo kale si isa soo taraysa ugu adeegsatay ilaalinta iyo habka ka warhaynta muwaadiniinta caadiga ah iyo booliska labadaba. Horraantii 1990-meeyadii bileysyo kala duwan oo Mareykan ah, kaamirooyin lagu rakibay kaamirooyin gudaha gaariga ah ayaa soo ifbaxay hab cusub oo loogu duubo xiriirka dhabta ah ee ka dhexeeya booliska iyo rayidka (Pilant, 1995).
In kasta oo caqabadii hore ee saraakiisha booliisku ay siinayeen kaamarooyinkaas (Pilant, 1995), baarista waxay muujisay inay kordhiyeen dareenka amniga ee saraakiisha booliisku dareemayaan marka ay gudanayaan waajibaadkooda, kordhinta isla xisaabtanka iyo daah furnaanta qeybta booliska. iyo yareynta wixii mas'uuliyad ah ee booliiska ka yimaada. Sidaas darteed, tikniyoolajiyaddan ayaa si ballaaran loo aqbalay oo ay u hoggaansameen masuuliyiinta fulinta sharciga Mareykanka (IACP, 2003).
Dhinaca kale, nidaamyada CCTV waxay caan ku noqdeen hay'adaha kaladuwan ee maxalliga ah iyo kuwa sharci fulinta maadaama ay bixinayaan laba ilaalo oo aad u muhiim ah iyo aragtiyo ka hortag ah, sida ka hortagga dembiyada guud ahaan iyo aalad loogu talagalay baaritaanka booliiska.
Dabcan, fiditaanka iyo fiditaanka taleefannada casriga (oo leh muuqaal fiidiyow ah iyo kamarad maqal ah) da'da casriga ah ee casriga ah ayaa sidoo kale kordhiyay awoodda ay ku duubayaan dhacdooyinka sida ay u dhacaan, gaar ahaan inta ay booliska iyo muwaadiniintu la xiriirayaan. Sidaas darteed, fiidiyowga iyo cajaladaha maqalku waxay noqdeen qayb aad u baahsan oo qarnigii 21-aad.
Waa maxay Jirka Worn Cameras-BWCs?
Waxyaabihii ugu dambeeyay ee teknoolojiyadda ku saabsan qeybta fulinta sharciga ee la socoshada waxaa kamid ah kaamirooyinka ay xirtaan booliska iyo ilaalada khaaska ah inta ay ku gudajiraan howlaha (sarkaalka booliiska ee kamaradaha xiran). Tikniyoolajiyadda adeegsiga kamaradahaasi waa mid aad u fudud oo mar dambe ayaa la sharixi doonaa.
Kaameerada uu watay sarkaalka booliiska ama waardiyaha (oo ah aalad yar oo duubi karta sawirka iyo codka) waxay diiwaangelineysaa wada shaqeynta iyo xiriiriyaha sarkaal booliis ama ilaaliyaha amniga muwaadin, dhibanaha ama dambiile geyste. Fiidiyowga iyo maqalka ay qabteen kaamirooyinka la qaadan karo waxaa adeegsada Hay'adaha Amniga iyo Adeegyada si ay u bixiyaan hufnaan xiriirka ay la leeyihiin bulshada rayidka ah oo ay ugu dambeyntii lagula xisaabtami karo.
Sidee bay ku shaqeeyaan kamarad la qaadi karo?
Tikniyoolajiyadani waxay adeegsaneysaa kaamiro lagu rakibay jirida ama jirka sarkaal booliis ama waardiye. Kaameeraha la qaadan karo ayaa lagu xirayaa xadhig ka soo baxay qoorta sarkaalka boliiska ama waxaa lagu xiraa jeebka ama dharka labiska booliiska. Waxaa xitaa lagu dhejin karaa muraayadaha muraayadaha indhaha ee uu xirto sarkaalka booliiska. Guud ahaan, si kastaba ha noqotee, kaameradda la qaadan karo waxaa lagu meeleeyaa meelaha sare ee jirka si ay u bixiso muuqaal wanaagsan marka la duubayo fiidiyowga iyo maqalka.
Tikniyoolajiyadani waxay qabsan kartaa muuqaallo maqal iyo muuqaal ah. Tani waxay u oggolaaneysaa isaga inuu diiwaan geliyo waxa sarkaalku arko inta lagu gudajiro xilligiisa beddelashada sidaas darteedna wuxuu diiwaangelinayaa dhaqdhaqaaq kasta oo ka horreeya isaga iyo qof kasta oo uu la xiriiro. Awoodda duubista ayaa lagu xaddidi karaa dhowr saacadood illaa 14 saacadood. Waxaa jira kaamirooyin badan oo la qaadan karo oo ay xiran yihiin lebbiska booliiska, oo ay ku jiraan Panasonic, VIEVU, TASER International, WatchGuard, iyo Shirkadaha Wolfcom. Qiimaha kamarada noocan oo kale ah waxay noqon kartaa $ 200 ilaa $ 1000, oo udhaceysa $ 185 ilaa kudhowaad $ 925.
Kaamirooyinka gacantu waxay kujiri karaan xulashooyin badan, sida kontoroolka kamaradaha kala duwan ee isticmaalaha, sida riixista badhanka duubista, xakamaynta shaashadda taabashada, fiidiyowga, iyo socodka codka iyo awoodaha hore u eegista, iyo dib-u-ciyaarida hadda la marayo shaashad la isku dari karo. . Muuqaalka fiidiyowga ah ee lagu qabto kaamerada ayaa waxaa laga soo dhex qaadaa kumbuyuutar kamarad ah aaladda kaydinta maxalliga ah (tusaale ahaan shabakad maxalli ah shabakad gudaha ah) ama shabakadda kaydinta warbaahinta dhijitaalka ku saleysan ee internetka ku saleysan, halkaas oo xogta lagu xafidi karo laguna maamuli karo. Moodooyinka qaarkood ayaa sidoo kale oggolaanaya in fiidiyowga la dhigo iyadoo bilaysku durba ku sugan yahay goobta ficil.
Tikniyoolajiyadda adeegsiga kamaradaha la qaadi karo waxaa ku jira qaybo badan, kuwaas oo ku kala duwan soo-saareyaasha kala duwan ee kaamirooyinka noocan oo kale ah sida aan horayba u soo sheegnay. Tusaale ahaan, Nidaamka TASER International ee loo yaqaan AXON waxaa ka mid ah-
Kamarad yar oo ku labisan dareeska booliiska (ha ahaato koofiyad ama koofiyad shaati ama muraayadaha qorraxda) oo diiwaangeliya waxa booliisku arko,
Aalad yar (tusaale ahaan Laptop-ka Smartphone) oo ah halka fiidiyowga lagu keydiyo; iyo
Bateriga soconaya illaa 12 illaa 14 saacadood oo ay kujirto kaameeraha korantada kaameeraha ah si ay ugu suuragasho kamaradu inay qabato sawir booliis markii la doono.
Nidaamka AXON wuxuu la imaanayaa adeeg kaydinta xogta daruuriga ah halkaas oo sarkaal booliis ah ama sarkaal booliisku uu ku keydiyo duub faylka ka dibna adeegga kaydinta websaydhka dhinaca kale, VIEVU qaadista nidaamka kamaradaha ayaa ah nidaam taagan oo leh aaladda kombuyuutar ee ay saraakiisha booliisku ku qaadaan jirkooda oo ay kujirto fiidiyow iyo maqal maqal ah iyo gudbinta ku saleysan daruuriga iyo kaydinta xogta.
Dhanka kale, VIEVU qaadista nidaamka kaamirada waa nidaam xasilan oo leh aalad kombuyuutar oo ay saraakiisha booliisku ku qaadaan jirkooda oo ay ku jiraan kamarad fiidiyow iyo maqal ah iyo gudbinta ku saleysan daruuriga iyo kaydinta xogta.
Hal-abuurnimada Sawirka Farsamada ee Farsamada Qalabka ee Sannadka oo dhan ahaa kii ugu dambeeyey: December 2nd, 2019 by admin
2874 Wadarta Views 13 Views Maanta